हेटौंडा अस्पताल: उपचारभन्दा हैरानी बढी – Health Post Nepal
चिकित्सकको लापरबाही बढेकाे भन्दै सर्वसाधारणले दिए अस्पताल गेटमा धर्ना
हेटौंडा- मकवानपुरकाे एकमात्र सरकारी अस्पताल हेटौँडा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीले सहजै उपचार भन्दा पनि बढी हैरानी खेप्नु परेको गुनासो आएको छ। अस्पतालको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण बिरामीहरुले उपचारमा कठिनाई भोग्दै आएको भन्दै सोमबार सर्वसाधारणहरुले अस्पतालमा धर्ना दिए। गर्मीमा बिरामीहरु तातो जस्तामुनि घण्टौं लाइन बसेर ओपिडीको टिकट काट्नेदेखि औषधि लिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । बिहान ६ बजेदेखि अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक भीड लाग्ने गरे पनि अस्पताल प्रशासनले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बिरामीहरु आक्राेशित भएका हुन्।
अस्पतालका चिकित्सकहरु बिरामी जाँच गर्ने पूरा समय नबस्ने गरेका कारण कतिपय बिरामीहरुले समयमै उपचार पाउन नसकेको गुनासो छ । चिकित्सकहरुको लापरबाही बढेपछि सोमबार सर्वसाधारणहरु अस्पताल गेटमा धर्ना बसेका थिए । धर्ना बसिरहेका बेला अस्पतालमा करारमा कार्यरत् अर्थोपेडिक डाक्टर रविराज देवकोटा स्कुटर लिएर बाहिर निस्किए । उनलाई गेटमा धर्ना कसेर बसेका सर्वसाधारणले रोकेर बिरामी जाँच गर्ने समय बाँकी हुँदै कता हिँडेको ? भन्दै प्रश्न गर्दा डा.देवकोटा नाजवाफ बने । उनले जाँच गर्ने बिरामी नरहेकाले बाहिर हिँडेको बताएका थिए ।
बिरामी जतिबेला पनि आउन सक्ने भन्दै ड्युटी सकिनु अगावै हिँड्न नहुने माग सर्वसाधारणको थियो। सर्वसाधारणले अस्पतालमा बिरामी जाँच्न छोडेर मेडिकलमा हिँडेको आरोप लगाएपछि उनले कुनै त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। डा. देवकोटाले अबदेखि आफू पूरा समय बसेर मात्रै निस्किने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। डा. देवकोटा चिकित्साको पोशाक नलगाई र परिचयपत्र नबोकी हिँडेका थिए ।
धर्नामा सहभागी दीपेन्द्रचन्द ठकुरीले देवकोटालाई पहिलो र अन्तिम सुझाव भएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । अस्पतालका डाक्टरमाथि उनीहरुले निगरानी बढाउने बताएका छन्। सर्वसाधारणले अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.रामचन्द्र सापकोटालाई पनि कडा चेतावनी दिएका थिए। अस्पताल प्रशासनले लापरबाही गर्ने चिकित्सकहरुलाई कुनै कारबाही नगरे अब जनताले नै कारबाही गर्ने चेतावनी उनीहरुको थियो । मेसु सापकोटाले लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही हुने बताएका छन्
अस्पतालमा टोकन काट्नदेखि चिकित्सकलाई देखाउन र औषधि लिँदासम्म ३ दिनदेखि ४ दिनसम्म लाग्ने गरेको उनीहरुले मेसु सापकोटालाई अवगत गराउँदै तत्काल सुधारका लागि आग्रह गरे । वर्ष दिनअघि हेटौंडा अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीको अनुपातमा यसवर्ष बिरामीको संख्या दोब्बर भएकाले भीड बढेको अस्पतालले जनाएको छ ।मौसमी बिरामीका कारण पनि अस्पतालमा बिरामीहरुको भीड थामिनसक्नुको छ। ओपीडी टिकट पाउन पहिला टोकन लिनुपर्ने व्यवस्था छ । टोकन बुझाएपछि मात्रै ओपीडी टिकट पाइन्छ । टोकन लिन निश्चित समय तोकिए पनि सर्वसाधारणहरु त्यसको करिब दुई घण्टा अघिदेखि नै टोकनको लाइनमा बस्ने गरेका छन्।
टिकट काटेर १० बजेपछि उपचारका लागि बल्ल ओपीडीमा चिकित्सक भेट्न पाइन्छ । चिकित्सक भेट्न पनि बिरामीहरु घण्टौसम्म कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उपचारपछि औषधि लिनदेखि रगत, पिसाब र दिसा जाँचदेखि एक्सरे गर्नपनि पुनः लाइनमै बस्नुपर्ने समस्याबाट अस्पताल पुगेका बिरामीहरु हैरान भएका छन्। सबै उपचार सकेर डाक्टरहरुलाई रिपोर्ट देखाउन पनि नपाइने उनीहरुको गुनासो थियो। बिरामी जाँच्ने समय अगावै डाक्टरहरु निस्किने गरेकाले बिरामीहरुले दुःख पाएको सर्वसाधारणहरुकाे गुनासो थियाे।
अस्पतालले बिमाका बिरामीलाई सस्तो औषधिमात्रै उपलब्ध गराउने गरेको र महंगो औषधि बाहिर किन्न पठाउने गरेको बिरामीकाे गुनासो छ।